🥇 ▷ Console Nintendo Switch wuxuu lahaan doonaa daabacaad gaar ah oo Disney ✅
Konteenarka Nintendo Switch Waad heli doontaa daabacaad gaar ah oo Disney ah oo u muuqata mid qurux badan oo aannan sugi karin in la sii daayo.
Konteenarka Nintendo Switch Waad heli doontaa daabacaad gaar ah oo Disney oo u eg midabo qurux badan. Dheeraad ah, Badhanka guriga wuxuu leeyahay dhegaha Mickey Mouse oo gabi ahaanba ka dhiga mid gaar ah.
Console wuxuu leeyahay labo midabood oo Joy-Con ah oo aan weligood hore loo arkin. Midkood waa guduud iyo astaamo u qurxiya. Midda kale Joy-Con Waa midab casaan leh oo leh astaamo, laakiin leh dhegaha Mickey Mouse oo ku jira badhanka guriga.
Doonida ayaa waliba loo qurxiyaa qaab muuqaal ahaan u muuqda. Sidoo kale Waxay leedahay wajiga Stitch, Mickey, Minnie iyo Winnie Pooh. Kee waxay ka yimaadeen ciyaarta fiidiyowga gaarka ah ee loogu talagalay ‘Switch’, Disney Tsum Tsum Festival.
Haddii aad weydiisato, Haa, ciyaarta Disney waxaa lagu daraa qalabka koongareeska isla qiimaha.
Si murugo leh Tani waxay noqon doontaa mid gooniya oo keliya Japan laakiin maadaama aynaan awood ahaan ugu istaagi karin. Marka halkan waxaan kaaga tageynaa xiriiriyaha si aad u iibsato.
Marka waxaad ka dalban kartaa Amazon ka Japan qiimo dhan 39,688 yen. Waa kuwee Waxaan kaga tagi karaa qiyaastii $ 365 doolar waqtiga qorista qoraalkan. Samee isbeddelka iyada oo kuxiran lacagta waddankaaga.
Xusuusnow taas sidoo kale waa inaad bixisaa qiimaha dhoofinta taasina, mahadeeda ahaan inaad ka soo iibsatay Japan, damaanadaada laga yaabo inaysan ansax noqon. Aan ka ahayn taasi waa sababta oo ah khaladka ‘Joy-Con Driveft’, kaas oo aad ku dayacti karto iyaga la’aantiis dhibaato la’aan iyo bilaash. Laakiin Noocyada cusub ee loo yaqaan ‘Switch’ Waxaa laga yaabaa inaysan lahayn dhibaatadan.
Marka waxaad kaliya ka walwalaysaa inaad bixiso lacagta qalabka korantada inta aysan dhammaan. Sida Taariikhda la siideynayo waxay noqon doontaa Oktoobar 10, 2019.
Daacadnimo anaga Waxaan u dhiman nahay inaan gacmaha kugu qabno waxaanna rajeyneynaa in tani ay tahay tii ugu horreysay ee daabacado badan oo khaas ah. Maaddaama haddii wax naga tagayaan ay inaga liitaan, ha u ahaato cayaaraha fiidiyowga.